Ọkachamara Semalt na Twitter Business Tips To Boost Your Marketing Advertising
Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ikwu na Twitter bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu ma dị ịtụnanya maka ndị ọchụnta ego ka ha na-etolite ọnụnọ ha n'ịntanetị. Ọ na-enyere ha aka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ha ma mee ka ọrụ ndị ọrụ ha dị ukwuu.
Ọ bụ ezie na e nwere ihe dị iche iche ahịa azụmahịa Twitter, ndị na-esote Frank Abagnale, ọkachamara ọkachamara site na Semalt , na - emetụta mmekọrịta ahịa na-aga nke ọma ma na - enye gị ọtụtụ nba uru.
Na-eme ka azụmahịa gị na Twitter
Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị ahịa niile nwee ike ịkwalite ọrụ ha na Twitter. Ị ghaghị ịmepụta mgbasa ozi Twitter ma rụọ ọrụ dịka onye ọkachamara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ ndụ ruo oge ndụ gị n'ịntanetị. Ntughari pụtara na ị ga-agbakwunye omenala ịdebere na profaịlụ Twitter gị - computer support and services in Portland. Ka oge na-aga, ọ ghọwo akụkụ dị mkpa, na ịlanarị azụmahịa na-adabere n'otú e si gosipụta akara gị na ịntanetị. Usoro ahụ dum na-amalite site na ezigbo mmiri. Ee, ị ga-ede akwụkwọ dị mma na mkpụrụedemede 160 na profaịlị Twitter ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme na ịme ahịa gị na ịntanetị.
Mee Ọdịnaya Gị
Ihe a chọrọ iji wepụta oge na imepụta atụmatụ atụmatụ Twitter. Ị nwere ike ịmepụta azụmahịa gị ma ọ bụrụ na ị na-elekọta usoro nduzi nke mgbasa ozi na-ekwe ka ọdịnaya gị bụrụ ihe okike na itinye aka..Ihe a nile ga - ekwe omume naanị mgbe ị wuru usoro ị nwere. I kwesiri ịmepụta ihe omume enyi na enyi na onye na-ekwu maka azụmahịa gị n'ụzọ ka mma. Họrọ isiokwu ndị na-adọrọ mmasị na isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ iji dọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ. Ọzọkwa, ị kwesịrị ilekwasị anya n'ịnapụta ndị na-ege gị ntị uru. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ndị ọrụ Twitter niile na ndị na-eme ụfọdụ azụmahịa.
Ị ga-eji hashtags iji mepee akụkụ nke ọdịnaya gị. Ihe kachasị nke ndị ọrụ Twitter na-eji ihe nkedo iji jikọọ ndị dị mkpa ma soro ọtụtụ ndị si mba ọzọ na-emekọ ihe. Ị ga-ahọrọ hashtags dabere na ndị na-ege gị ntị na ebe nrụọrụ weebụ. Ị ga-etinyekwu akwụkwọ ntanetị, nke ka mma ga - arụpụta na Twitter.
Gbanwee ma Tinye Ndị Na-eso Ụzọ Gị
A na-ele ahịa ahịa mgbasa ozi anya dị ka ihe ịga nke ọma nanị mgbe i toro ma kwụnye ndị na-eso ụzọ gị ọnwa ọnwa. Gbaa mbọ hụ na ndị na-egwu Twitter enweghi ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike gwụrụ ha ka ha nwere ike imebi gị ozugbo. I kwesiri igba ndi ozo ume igwa gi okwu ma tinye onye obula n'ime uzo di iche iche kwa ubochi. Nke ahụ ga-emesị mụbaa ọnụ ọgụgụ gị nke ndị na-eso Twitter na azụmahịa gị n 'ọhụụ.
Nyochaa Nsonaazụ gị ma megharịa mgbalị gị
Ikpeazụ mana ọ bụghị nke kachasị nta, ị ga-atụle nsonaazụ gị ma dozie mgbalị otu ugboro n'izu. Maka nke a, ị nwere ike iji ngwaọrụ Twitter dị ka Trtrland, Twitalyzer, na TweetReach. Ngwaọrụ ndị a niile na-eme ka ọ dịrị gị mfe nyochaa mgbalị ahịa Twitter gị. Dabere na nsonaazụ ya, ị nwere ike ịmepụta akụkọ ma chọpụta usoro ndị dị mma maka mgbasa ozi gị. Mee ka atụmatụ ndị a bụrụ akụkụ nke azụmahịa gị ma kpochapụ ndị nyere azụmahịa gị enweghị uru.